Maxamed Xasan Cirro: Filimaanta Hindiga, sharafta dumarka iyo doorsoonka dhaqankii Soomaaliyeed – Radio Daljir
Maxamed Xasan Cirro: Filimaanta Hindiga, sharafta dumarka iyo doorsoonka dhaqankii Soomaaliyeed
Abriil 3, 2019 1:08 b 0
Waa goor subax ah, maalin Sabtiya, 30 Maarso 2019, wiil dhalinyaro ah oo hotel aan deganahay Muqdisho goobta dadka martida ahi fariistaan ayuu ku daawanayaa filim Hindiya oo la af Soomaaliyeeyey, waan dhinaca fariistay, waxaa wejigiisa ka muuqata dareen aad u farxad badan oo ka turjumaya siduu u qushuucsan yahay, ereyada filimkuu daawanayo aan ka maqlay waxaa ka mid ahaa:
“Aabbahaa jacaylkeenuu ka soo horjeeda ee maxaan ku samaynaa, igu fasax aan shaqo ka qabtee, gabadhuna waxay leedahay, sug sug anniga ma u dulqaadanayo wax jacaylkena horistaaga.”
Ereygaan markaan maqlay waxaa ii baxay Hindiga af Soomaaliga lagu turjumay wuxuu bulshada ka bedeli karo.
Waddamada dunidu waxay leeyihiin hay’ad dawladeed oo soo saarta filimada, falsafadda ka danbaysaa filimaanta in la sameeyo waa wacyigelin wadankaasi ku ilaalinayo jiritaankiisa, loogana ilaaliyo saamaynta dhaqamada kale ku leeyihiin, dadka jilayaana waa kooxo fannaaniin ah, waddan kasta filimkuu soo saaro wuxuu ku salaysanyahay dhaqanka iyo anshaxa bulshadu leedahay, waxaa lagu gardaadiyaa hanka, hal abuurka iyo taariikhda, sidoo kale filimaanta waxaa loo adeegsadaa dagaal maskaxeed lagu jebiyo cadowga.
Akhriste, Muqdisho waxaa ka jira shirkado badan oo markasta baahiya filimaan Hindi ah oo Af Soomaali lagu turjumay, wuxuuna balwad iyo madadaalo u noqday guryaha, iyadoo gabdhaha iyo hooyooyinkuba goor kasta ku foogan yihiin daawashadiisa.
Hindiya waa wadan ay hal bilyan oo qof dad ka badani ku nool yihiin. Filimaan samayntoodu waxay salka ku haysaa faafinta dhaqankooda. Dhaqanka Hindiya marka loo barbardhigo dhaqanka Soomaalida waa kuwo aad u kala fog, waxaan ku kala duwannahay qaab dhismeedka bulsho, cunno, dhaqaale, tacliin iyo aaminaadda.
Maansada Hindida waxay ka hadashaa jacayl, halka maansada Soomaaliduna ay ka hadasho hillimo kala gedisan oo gaaraya 16 hillin oo dhamaanteed ah xeyndaab nololeed ku meegaaran deegaanka iyo hab nololeedka qofka Soomaaliga ah.
Boogta ugu daran ee filimaanta Hindigu saamaynta ku yeesheen waa xiriirka guurka, waalidka iyo dhallaanka. Dhaqanka Hindiga waxaa aasaas u ah gabadhu inay doonto wiilka, waxay u tegeysaa qoyska wiilka, waxay u sheegaysaa inay rabto wiilkooda, iyadaana soo bandhigaysa baahideeda guur, marka laga ogolaadana waxay bixinaysaa yaradkii wiilkay guursanayso.
Filimaanta hindigu waxay xoojiyaan dhaqankaas, oo gabdhaha jilayaa waxay ka hadlayaan doonista wiilkay rabaan, arrimo taas u dhow ayaa Muqdisho ka jira oo gabadhuhu si gabasho la’aan ah wixii filimaantaas laga keenay ay ku hadaaqaan.
Maxaa se ka soo baxay?
Cid cilmi baaris ku samaysay ma jirto, waxaa se jira dhibaatooyin ka dhashay, sida gabadh leh jacayl dartiis ayaan isu dilayaa, is gubayaa, qoysas isku haysta guur dhexmaray laba qof oo ay dhaleen, gabdho yaryar oo ku hadaaqaya hebel waa inuu I guursadaa, jacayl taagan ah, tolow ma wadnaha Hindigaa jacaylka taaganta leh, mise wuu ku neefsaday, ereyada kale ee caanka hadda ka ah Muqdisho waa:
Baby love = Nin la rabo
Baby cash = nin lacag keliya lagu rabo
Xabadkayga = qof suuqa keliya lagu maro
Waa xiriirka joogtada ah ee hal qof leeyahay, waana kuwo ka dhashay ereyada ah “Waalidkeen jacaylkeena ma horistaagi karo.” Ma aqaan jacayl waalid la colloobay meeshuu u socdo.
Dhaqanka Soomaaliyeed waa mid ku salaysan sarraynta gabadha oo ah in iyada la raadiyo, wiilka ayaa wax doona, shukaansiga iyo sheekada bilaaba, u kabagashanaya, wakhti iyo dhaqaale ku bixinaya, kadibna waalidka iyo qoyskeeda u tegaya oo ka doonanaya, isagoo bixinaya gabaati, sooryo iyo wixii kale ee sharafta gabadha, isaga iyo qoyskiisaba kor u qaadaya. Filinkaan hindigu se taas wuu oofwareemay, wuxuuna ku bedeley “hooyaday jacaylkayga maxay ka rabtaa” iyo gabadh dil loo geystay iyadoo la leyahay waa jacayl dartiis!
Ninka Soomaaliyeed sharaftiisu waa gabadha, waana sababaha markasta aan uga soo horjeedno in gabadhaheennu ay u galaan dad ajaanib ah, ma ahan cunsuriyad, waa hab dhaqan soo jireen ah oo ku salaysan in ninka Soomaaliyeed ay sharaftiisu ku xiran tahay hufnaanta gabadha uu dhalay iyo xaaska uu qabo.
Waxaa ku xoogganaa dhexdeena in waxkastoo gabadh dhinaceeda jira la qiimeeyo, haddii nin lagu yiraahdo gabadh ayaa lagu siiyey hadduusan diyaar u ahayn waa inuu af ahaan u aqbalaa, taasoo macno ahaan u taagan gabar ma rabo la yiri inay ka dhalanayso xaal iyo xumayn.
Haddase markii gabadhii soo koobi-garayeen atariishadii Hindiga waxay dariiqa la istaagaysaa hebelow waan ku rabaa, wiilkiina wuxuu la soo istaagayaa anniga kuma rabi, xaal ayaa qabtay, laakiin xaal ma yaqaan atooraha Hindiga ah ee macallinka u ah dhallanteena.
Aabbaha iyo hooyadu waa udubdhexaadka qoyska, waxay goor walba u ordayaan waa in ay soo saaraan carruur leh yool iyo mustaqbal wanaagsan, markay noqoto barbaarinta gabadha hooyadu waa tiirka koowaad ee gabadheedu ku dayanayso, waa tan laga rabo inay barto hufnaanta, anshaxa iyo milgaha gabadhu yeelanayso, kuna hoggaamisa dhowrsanaanta iyo xishoodka, in ay gabadheeda ku fasaxdo fiirsashada filim ay ogtahay inuu ka dilayo kalsoonida nafeed iyo damiirkeedii wanaagsaa waxay noqonaysaa masuuliyad-darro. Hooyo haddaadan ka joojin karin gabadhaada filimka Hindiga ugu yaraan ka yareen fiirsashadiisa, kalana tali saamayntuu ku yeesho.
Shirkadaha turjuma filimaanta Hindiga
Turjunka filimaanta Hindigu waa mid soo jirtay tan iyo wakhtigi dawladdii AU Maxamed Siyaad ay sii dhacaysay, ma garan karo maskaxda hindistay waxay markaas ku salaysnayd, waxaanse filayaa inay dan dhaqaale raadis laga lahaa.
Waxaan talo ahaan u jeedin lahaa shirkadaha turjuma filimaanta inay fiiriyaan waxay turjumayaan waxa ka dhalan kara bulsho ahaan, haddaysan dhaafayn ay xoogga saaraan turjumidda filimaanta bulshada dhisa, sida kuwa waxbarashada, kuwa ka hadlaya axsaanka iyo iscaawinta, kuwa ka hadlaya farsamada casriga ah iyo dawladnimada wanaagsan.
Xoojinta hal-abuurkii Soomaaliyeed
Maansada kala geddisan ee Soomaalida markaad dhuuxdo waxaa kuu soo baxaya hal-abuurka quruxda badan ee dadku leeyahay, waxaa se adhaxda ka jebiyey dawlad la’aanta, waxaa kale oo dhibaato ku ah culimada oo inta badan in filimaan ama riwaayado la sameeyo iyo dadka sameeyaba xadka ka saara, taasi waxay keentay in la waayo wax Soomaali leedahay, baddelkeedna in carruurteena iyo dadkeena waaweyn ay madadaalada ay heli karaan noqotay wax waddamo kale laga keenay.
Waxaan soo jeedin lahaa in Dawladda Soomaaliya iyo meelaha maamuladu ka jiraan xoojiyaan hal abuurka soo saarista filimaan gudaha ah, oo ka hadlaya madadaalada carruurta, taariikh, dhaqan, sheekooyin, riwaayado iyo wixii kale ee dadka xadaaradiisa ka turjumaya. Haddii kale aabe kastaa ha sugo marka wiilkaaga gabadhuu guursadaa ku tiraahdo “aabbahaa jacaylkeenuu ka soo horjeedaa ee shaqo ka qabo!”
Maqaalo Kale 310 Wararka 21389